प्राण घातक किङ्ग कोब्रोले टोक्दा पनि यिनलाई बिष लाग्दै ! १३०० सय भन्दा बढ़ी सर्प पक्डे कतिले टोके कतिले!(भिडियो सहित) - Complete Nepali News Portal
प्राण घातक किङ्ग कोब्रोले टोक्दा पनि यिनलाई बिष लाग्दै ! १३०० सय भन्दा बढ़ी सर्प पक्डे कतिले टोके कतिले!(भिडियो सहित)
ScotNepal November 26, 2019
मानिस भित्र पक्कै पनि आ आफ्नो कला हुन्छ तर आज जुन कला भनौ या प्रतिभा हामीले देखाउदै छौ एकदमै अचम्म लाग्दो आनौठो छ। एउटा यस्तो खतरनाक प्रतिभा पक्कै पनि हर कसैमा यी कुराहरु सम्भव हुदैनन् । आज भोली नेपाली युटुबर हरुले निकैनै अचम्म खालका कन्टेन्ट हरु च्यानल बाट प्रशारण गरि रहेका हुन्छन । त्यसै क्रममा आज हामी कुरा गर्दैछौ २१ बर्षिय युवा सागर पाण्डे जो आज भोली स्नेक म्यान भनेर पनि नेपालमा चिनिन्छन ।
पाल्पा जिल्ला लुम्बिनी अञ्चलमा जन्मियका सागर पाण्डे ले अहिले सम्म करिब करिब १३०० सय भन्दा बढी सर्प समाते र कतिले उनलाई टोके पनि होलान तर अचम्म छ कि उनले आजको दिन सम्म सर्पले टोक्यो भनेर औषधी भने गराएका छैनन्। यस शक्तिलाई उहाप्रति भगवानको देन भन्नेकी या फेरी एउटा अनौठो प्रतिभा।
सागर भन्छन बिभिन्न ठाउहरुमा भयका कार्यक्रममा उनले आफु भित्र रहेको यो अचम्मित खालको कला र प्रदसन गरि सकेका छन्। त्यस्तै उनका पिता बिष्णु प्रसाद संगको हाम्रो कुरा कानीमा उहा भन्नु हुन्छ यो एउटा प्रतिभा हो सर्प संरक्षण गरेर समाज सेवामात्रै गर्दै जाने हो भनि आफ्नो जिबिको पार्जन गर्न गार्हो छ।
दर्शकविन सागर पाण्डे संगको यो अनुठो प्रतिभा अन्तरबार्ता क्रममा अरु के के देखियो त् पक्कै अनि यस भिडियोलाइ अन्तिम सम्म हेर्नुहोला ।